Ardayda Jaamacada Jimma iyo ciidamada Woyanaha oo iska Horimaad xoogani kadhex socdo. | ogaden24
Ardayda Jaamacada Jimma iyo ciidamada Woyanaha oo iska Horimaad xoogani kadhex socdo.
Wararka ka imaanaya dhulka Oromada gaar ahaan magaalada Jimma ayaa sheegaya in ardayda Jaamacada Jimma iyo ciidamada Woyanaha uu iska hor imaad culus oo khasaare badan gaystay ku dhex maray Gudaha Jaamacada iyo banaankeeda.
Hardanka u dhexeeya ciidamada Woyanaha iyo Ardayda Jaamacada Jimma oo socday 3-dii maalmood ee lasoo dhaafay, ayuu khasaare kala duwan kasoo Gaadhay Labada dhinac waxayna ciidamada Woyanuhu ku Guuldaraysteen Qorshe ay doonayeen inay qaar kamida ardada xabsiga u taxaabaan.
Sida warku sheegayo ardada wax kabarata Jaamacada ayaa Labadii maalmood ee u dambaysay waxaa ay sii xoojiyeen kacdoonka ay kala soo Horjeedaan ciidamada Woyanaha, waxayna ardaydu isugu soo baxeen banaanka Jaamacada halkaasi oo iyaga iyo ciidanka Woyanuhu fooda iskudareen.
Dhinaca kale Dr. Fiqaadhu, oo kamid ah Macalimiinta Jaamacada Jimma wax ka dhiga aadna looga yaqaano Jaamacada ayay ciidanka Woyaanuhu jeelka dhigeen kadib markii ay jidh-dil iyo ciqaab badan ay u gaystay professor ka iyagoo kusoo eedeeyay inuu kacdoonka ardaydu wadaan uu wax ka ogyahay kuna taageersan yahay.
Ciidanka Woyaanaha oo aad u muuraal jabsan ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya guud ahaan shacabka Itoobiya gaar ahaan ardayda iyo inta damiirka leh ee ka dhiidhiday ciqaabta iyo cabudhinta shacabka Itoobiya lagu hayo. Kacdoonkan cusub ee Ardayda Jaamaca Jimma ay ku talaabsadeen ayaa kusoo beegmaya iyadoo uusan sinaba u dhaqan galin fulinta xaalada deg degga ah ee Woyaanuhu dalka kusoo rogay.